Warwick: Tahirin-tsary 7 (Septambra 2016—Febroary 2017) | JW.ORG
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Batak (Toba) Catalan Danoà Espaniola Estonianina Failandey Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Javaney Kazakh Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Poloney Rarotonga Romanianina Rosianina Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tahisianina Tailandey Tseky Valencienne Vietnamianina Xhosa Yorobà
Warwick: Tahirin-tsary 7 (Septambra 2016 ka Hatramin’ny Febroary 2017)
Jereo ato amin’ity tahirin-tsary ity hoe inona avy ny asa natao rehefa akaiky ho vita ny foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah vaovao. Ho hitanao ato koa fa efa nanomboka nampiasa an’ireo trano ireo ny mpiasa an-tsitrapo tamin’ny Septambra 2016 ka hatramin’ny Febroary 2017.
Sarin’ny Betela any Warwick, amin’izy efa vita. Miainga avy any ambony havia:
Trano fikojakojana/Parking ho an’ny Betelita
8 Septambra 2016: Warwick
Efa ampiasaina daholo izao ny trano rehetra any Warwick. Nisy 500 eo ho eo ny olona nipetraka tao, tamin’ny voalohandohan’ny Septambra, ka anisan’izany ny mpiasa an-tsitrapo manao fanorenana sy ny mpiasa manontolo andro nifindra avy any Brooklyn.
20 Septambra 2016: Trano misy an’ireo birao sy sampan’asa samihafa
Mpanao zavakanto mijery verinia amin’ny karô, ampiasaina eo amin’ny fidirana ao amin’ilay fampirantiana hoe “Vahoaka Mitondra ny Anaran’i Jehovah.” Natao hoatran’ny hoe efa tranainy mihitsy ireo karô, mba ho hita hoe efa ela ny zava-nitranga ao amin’ilay fampirantiana.
28 Septambra 2016: Trano misy an’ireo birao sy sampan’asa samihafa
I Stephen Lett, anisan’ny Filan-kevi-pitantanan’ny Vavolombelon’i Jehovah, no nitarika ny fotoam-pivavahana maraina voalohany tao Warwick. Nalefa tany amin’ny Betela hafa any Etazonia koa ilay fandaharana. Namaky taratasy fisaorana ny Rahalahy Lett tamin’io maraina io. Nisaorany tamin’izay ireo mpiasa an-tsitrapo 27 000 mahery nanorina an’ilay Betela vaovao sy ny olon-kafa maro nanampy tamin’ilay tetikasa goavana.
3 Oktobra 2016: Trano misy an’ireo birao sy sampan’asa samihafa
Mpandrafitra anankiray mametaka an’ireo soratra hoe “Vahoaka Mitondra ny Anaran’i Jehovah”, eo amin’ny fidirana mankao amin’ilay fampirantiana. Ny tantaran’ny Vavolombelon’i Jehovah nanomboka tamin’ny taona 1870 tany ho any ka hatramin’izao no hita ao amin’ilay fampirantiana, ary tsy mila mpitarika izay mitsidika ao.
5 Oktobra 2016: Trano misy an’ireo birao sy sampan’asa samihafa
Ny Komitin’ny Fanoratana sy ny mpanampy azy, miara-mivory amin’ny Sampan-draharahan’ny Fanoratana. Misy efijery lehibe anankiroa ao amin’ilay fivoriana. Ny iray mampiseho sary eritreretina hatao ao anaty gazety vao havoaka, fa ny iray ahafahana mifampiresaka amin’ireo sampan-draharaha hafa. Ilay latabatra kosa nisy nanome efa taona maro izay. Avy any Brooklyn izy io no nafindra tany Warwick.
20 Oktobra 2016: Trano misy an’ireo birao sy sampan’asa samihafa
Rahalahy iray mpanampy ny Komitin’ny Mpandrindra miaraka amin’ny mpiasa hafa eo ambany fiandraiketany. Vao nisy an’ilay Rivo-doza Mahery atao hoe Haima (Lawin) tany Philippines iray andro talohan’io, ka miara-midinika ry zareo hoe ahoana no anampiana an’ireo tra-boina any. Afaka mifankahita sy mifampiresaka mivantana amin’ny biraon’ny sampana eran-tany amin’ny alalan’ny Internet ry zareo any amin’ny foibe. Azon-dry zareo atao àry ny manampy, raha misy loza mitranga ka ilana vahaolana maika.
28 Oktobra 2016: Trano misy an’ireo birao sy sampan’asa samihafa
Dobo anankiray manasaraka ny trano fikojakojana sy ny arabe fidirana. Misy dobo hoatran’io koa any an-toeran-kafa ao amin’ny Betela. Tazonin’ireo dobo ireo izay potipoti-javatra avy amin’ny ranonorana, ka rano madio kokoa no mivoaka avy eo. Manampy be mihitsy ireny dobo ireny satria mihena ho antsasany be izao ny vola lany, raha oharina amin’ny hoe mampiasa fantsona fivarinan’ny rano maloto. Rehefa mivarina any amin’ny renirano koa ny rano avy eo amin’ireo dobo ireo, dia tsy manimba ny tontolo iainana ho an’ny zavamaniry sy ny biby.
4 Novambra 2016: Trano misy an’ireo birao sy sampan’asa samihafa
Mpiasa mibata entana vao tonga. Misy 80 eo ho eo ny olona nanampy an’ireo Betelita nifindra avy any Brooklyn nankany Warwick.
14 Desambra 2016: Trano misy an’ireo birao sy sampan’asa samihafa
Mpanao mofo mamoaka kobana mofo boribory ngezabe avy ao anaty vilia baolina vy. Mavesatra be ilay koba satria 45 kg mahery ny lanjan’ny iray. Soa ihany fa misy fitaovana mpibata an’ilay izy, ka tsy atahorana hampidi-doza. Misy fitaovana hafa koa ao amin’ilay fanaova-mofo ao Warwick. Azo ovaovana ny hafanana sy ny hamandoana ao amin’ilay fitaovana, amin’izay lasa haingana kokoa na miadana kokoa ny fitomboan’ilay koba. Manamora ny asa ilay fitaovana satria mofo an-jatony no mila atao isan-kerinandro.
14 Desambra 2016: Trano fikojakojana/Parking ho an’ny Betelita
Mpiasa handeha hanary ny fako ary mivoaka avy eo amin’ny Trano Fikojakojana. Mifandray daholo ny ankamaroan’ny trano any Warwick fa tsy hoatran’ny tany Brooklyn. Mpiasa sy fiara vitsivitsy ihany àry no ilaina rehefa manangona ny fako hariana sy ny fako mbola azo ahodina ho zavatra hafa.
Mpiasa mitifitra rano eo amin’ny akanjo iray, amin’izay miala izay miforiporitra amin’ilay izy. Apetraka eo amin’ny fitaovana anankiray ilay akanjo. Misy bokotra potsirina mampandeha an’ilay fitaovana, dia tonga dia voapasoka ilay akanjo. Lamba 5 taonina mahery eo ho eo isan-kerinandro no sasana any amin’ny Sampan-draharahan’ny Fanasan-damba any Warwick. Misy soratra apetaka eo amin’ny lamba tsirairay mba ho fantatra ny tompony. Misy toerana maromaro anamarinana an’ireo soratra ireo, amin’izay fantatra izay tokony hatao amin’ilay lamba. Amin’izay koa tonga soa aman-tsara any amin’ny sampan-draharaha na efitrano tokony hanaterana azy ilay lamba.
20 Desambra 2016: Trano fikojakojana/Parking ho an’ny Betelita
Mpiasa mijery an’izay tsy mety amin’ny fitaovana fiakarana amin’ny toerana avo, ary mikojakoja an’ilay fitaovana. Amin’izay tsy mora simba ilay fitaovana sady tsy mampidi-doza an’izay mampiasa azy.
10 Janoary 2017: Trano misy an’ireo birao sy sampan’asa samihafa
Teknisianina mijery hoe inona ny olana amin’ny programana ordinatera iray. Io programa io mantsy no mampandeha ny video fampidirana an’ilay fampirantiana hoe “Nampiseho ny Finoany.”
11 Janoary 2017: Trano misy an’ireo birao sy sampan’asa samihafa
Mpandrafitra maromaro manomana bisikileta haseho eo amin’ilay fampirantiana hoe “Vahoaka Mitondra ny Anaran’i Jehovah.” Bisikileta nomen’olona izy io ary vita tamin’ny 1903. Efa nisy simba ilay izy fa namboarin’ireo mpiasa ao Warwick. Nampiasa bisikileta hoatran’io ny Mpianatra Baiboly (Vavolombelon’i Jehovah) tamin’izany, rehefa nitory ny vaovao tsara ao amin’ny Baiboly, ka hita hoe niezaka be sy nanao vivery ny ainy izy ireo.
12 Janoary 2017: Trano misy an’ireo birao sy sampan’asa samihafa
Mpandrafitra mametaka fitaratra hampirantiana zavatra momba ny “Fampisehoana An-tsary ny Famoronana” (anglisy). Fitambarana sary mihetsika sy tsy mihetsika izy io, ary tamin’ny 1914 no naseho voalohany. Olona sivy tapitrisa teo ho eo no nahita azy tamin’izay.
Mpanao zavakanto sy mpanao arisiva manomana Baiboly anankiray mba haseho eo amin’ilay fampirantiana hoe “Ny Baiboly sy ny Anaran’Andriamanitra.” Amin’ny teny latinina ilay Baiboly, ary vita tany Zurich tamin’ny 1544. Manondro an’ilay anaran’Andriamanitra hoe Jehovah ilay telozoro menamena kely eo amin’ilay Baiboly. Mitandrina be ireo mpanao arisiva mba hiarovana ny Baiboly sasany, izay mila kenakenaina. Arovana amin’ny plastika manify, ohatra, ireo pejy mba tsy hiendaka. Atao araka ny antonony tsara koa ny hamandoana sy ny hafanana ao amin’ilay efitra fampirantiana. Atao mety tsara koa ny hazavana avy amin’ny kabla fitaratra (fibre optique) mba tsy hanimba ny taratasin’ireo Baiboly ireo.
16 Janoary 2017: Trano misy an’ireo birao sy sampan’asa samihafa
Mpitsidika vitsivitsy sy ny mpanaraka azy, mitazana ny manodidina avy eny amin’ny tilikambo ao Warwick. Efa 23 metatra ny haavon’ilay tilikambo. Azo atao ny mitsidika ny Betela any Warwick sy ilay fampirantiana, ary tsy misy mpitarika. Nanomboka tamin’ny 3 Aprily 2017 izany. Tsy maintsy manao fangatahana mialoha fotsiny rehefa hitsidika any, ka ao amin’ny tranonkalantsika ao amin’ilay hoe MOMBA ANAY > BIRAO & FITSIDIHANA no fanaovana an’izany. Mila tenenina ao koa ny fotoana hitsidihana any.
19 Janoary 2017: Trano misy an’ireo birao sy sampan’asa samihafa
Mpanao arisiva mametraka Baiboly Dikan-tenin’ny Mpanjaka Jacques (anglisy) eo amin’ny toerany ao amin’ilay fampirantiana. Io no anisan’ny Baiboly voalohany amin’io fandikan-teny io. Vita tamin’ny 1611 izy io, ary efa tsy dia misy intsony izao. Ny mpiasa ao Warwick ihany no nanamboatra an’ilay fitoerany.
Mpanao zavakanto mametraka satroka anankiray ao amin’ilay fampirantiana. Io no satrok’i Joseph Rutherford, ilay nitarika ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah zato taona lasa izay. Ao amin’io efitra io no ahitana ny ezaka nataon’ny Vavolombelon’i Jehovah mba hitoriana ny vaovao tsaran’ilay Fanjakana. Mbola anisan’ilay fampirantiana hoe “Vahoaka Mitondra ny Anaran’i Jehovah” ihany ny ao.
20 Janoary 2017: Trano misy an’ireo birao sy sampan’asa samihafa
Mpiasan’ny Sampan-draharahan’ny Fandraisam-peo, manampy olona iray alaina feo. Mitantara momba an’ilay fampirantiana hoe “Ny Baiboly sy ny Anaran’Andriamanitra” ilay olona alaina feo. Herinandro mahery kely taorian’ny nifindrana avy tany Brooklyn dia efa niasa sahady io studio io. Ampahany amin’ilay studio any Patterson io studio io. Ao amin’io studio any Warwick io koa no andraisana feo ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao, Ny Tilikambo Fiambenana, Mifohaza!, ny lahatsoratra ao amin’ny tranonkala jw.org, ary zavatra raisim-peo hafa.
27 Janoary 2017: Trano misy an’ireo birao sy sampan’asa samihafa
Mpandrafitra mandoko sisina fitoerana sary. Mbola anisan’ilay fampirantiana hoe “Vahoaka Mitondra ny Anaran’i Jehovah” io toerana io, ary sarin’ireo Mpianatra ny Baiboly taloha kelin’ny taona 1900 no atao fampirantiana ao.
15 Febroary 2017: Trano misy an’ireo birao sy sampan’asa samihafa
Mpanao zavakanto mandoko ny sarin’i Kaleba, ilay ankizy ao amin’ilay video hoe Ataovy Namanao i Jehovah. Haseho ao amin’ny toerana anankiray io sarin’i Kaleba io. Ao amin’io toerana io no ahitana an’ireo fitaovana navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah mba hampianarana ny ankizy.
Mpandrafitra manapaka sary sy soratra hampiasaina ao amin’ilay fampirantiana hoe “Vahoaka Mitondra ny Anaran’i Jehovah.” Olona 250 mahery no niasa mba hamitana an’ireo fampirantiana anankitelo hatramin’ny voalohany ka hatramin’ny farany. Anisan’izany ny mpandrafitra, mpamorona programana ordinatera, mpanao drafitra, elektrisianina, mpametaka karô, mpaka caméra, ary mpanoratra.